मेगाको साउन २७ गते ४ः१ हकप्रद शेयर निष्काशन
साउन १०, काठमाडौं । मेगा बैङ्क नेपाल लिमिटेडले ४ बराबर १ (४ः१) अनुपातमा साउन २७ गते देखि भदौ २९ गते सम्म हकप्रद शेयर निष्काशन गर्दैछ । बैङ्कको शेयरधनीका लागि प्रति शेयर एक सय अंकित दरको ८१ लाख १ हजार ४ सय ३८ कित्ता हकप्रद शेयर निष्काशन गर्न लागेको हो । दोस्रो बजारमा आइतवार रू. ६ सय १ मा बारोबार भइरहेको बैङ्कको हकप्रद शेयर प्रतिकित्ता रू. १ सय अंकित दरमा खरिद गर्न पाइने छ ।
बैङ्कको साउन ९ गतेसम्म शेयर किन्ने वा शेयर स्वामित्व रहने शेयरधनी ुहुनले आवेदन दिन सक्नेछन् । बैङ्कको धितोपत्र निष्काशन तथा विक्री प्रबन्धक ग्लोबल आइएमइ क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ । त्यसैगरी, हकप्रद शेयर खरिदका लागि मेगा बैङ्कको सम्पूर्ण शाखाहरुमा दरखास्त फारम उपलब्ध हुने बैङ्कले प्रकाशित गरेको सूचना मार्फत जानकारी गराएको छ ।
हकप्रद शेयर निष्काशन पछि बैङ्कको चुक्ता पूँजी रू. ४ अर्ब ५ करोड पुग्नेछ । राष्ट्र बैङ्कले तोकेको ८ अर्ब चुक्तापूँजी पु¥याउन बैङ्कले यस आवमा थप ४ बराबर १ अनुपातमा हकप्रद शेयर निष्काशन गर्ने, रू. ५ करोड ६५ लाख बराबरको बोनस शेयर वितरण गर्ने र कुनै वित्तीय संस्थासँग मर्जरबाट रू. ६ करोड ७० लाख बराबरको चुक्ता पूँजी वृद्धि गर्ने योजना बनाएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैङ्कले इजातपत्र प्राप्त संस्थाहरुलाई २०७४ असार मसान्तभित्र न्यूनतम पूँजी वृद्धि गरिसक्नु पर्ने गरि निर्देशन दिएको मेगा बैङ्कले पूरा गरेको हुँदा इक्रा नेपालबाट क्रेडिट रेटिङ् गर्नु नपर्ने छुट पाएको छ ।
बैङ्कको गत आवको चैत्र मसान्तसम्म खुद मुनाफा रू. ३२ करोड २८ लाख पुगेको छ । त्यसैगरी, बैङ्ककोृ चालू आवमा रू. ८९ करोड ११ लाख खुद मुनाफा पु¥याउने प्रक्षपण गरेको छ । त्यसैगरी, बैङ्कको प्रति शेयर नेटवर्थ रू. १ सय २० दशमलव ८९ पुग्ने प्रक्षपण गरिएको छ ।